Mogadishu Journal » Bayern Munich Ayaa ku guuleysatay super cup 2-1 Sevilla:
Kooxda Hansi Flick ee Bayern Munich ayaa u baahnayd waqti dheeri ah si ay u aragto Sevilla Super Cup-ka, laakiin Javi Martinez oo bedel ku soo galay ayaa u horseeday guul 2-1 ah.
Javi Martinez ayaa ahaa geesiga aan loo badneyn ee Bayern Munich iyadoo ciyaaryahanka reer Spain uu ka soo kacay kursiga keydka si uu madax ugu dhaliyo waqtigii dheeriga ee guusha ee 2-1 kaga badiyeen Sevilla Super Cup.
Kooxda Hansi Flick oo seddexleey ku guuleysatay ayaa la dhibtootay koox madax adag oo Sevilla ah oo aan laga badinin tan iyo bishii Febraayo - orod ay ku jirto rikoodh lixaad oo ay ku qaaday Europa League, horey u ahayd UEFA Cup - kooxda LaLiga ayaana sii martay rigoore loo dhigay Lucas Ocampos.
Leon Goretzka ayaa barbareeyay ciyaarta ka hor qeybtii hore laakiin Bayern oo badisay 22 kulan oo isku xigta ayaa soo afjari lahayd haddii Youssef En-Nesyri uusan ka hor istaagin Manuel Neuer waqtiyada dhimashada ee waqtiga caadiga ah.
Laakiin wuxuu ahaa bedelkiisa Martinez, oo lala xiriirinayay inuu ku laabanayo Athletic Bilbao ka dib sideed sano oo uu ku sugnaa Bavaria, kaasoo dhaliyay goolkiisii ​​ugu horreeyay tan iyo bishii Abriil 2019 si uu u kasbado Bayern weli koobab badan.
Bayern ayaa furtay xilli ciyaareedkeedii 2020-21 iyada oo 8-0 ku garaacday Schalke laakiin waxa ay ahayd Sevilla oo goolka kowaad ku heshay rigoore Ocampos.
Luuk de Jong ayaa kubad madax ah uu gaarsiiyey Ivan Rakitic, ciyaaryahanka khadka dhexe - oo dib ugu soo laabtay kooxda ka dib markii uu dib uga soo laabtay Barcelona - waxaa istaajiyay David Alaba, iyadoo Ocampos uu ka dheereeyay Neuer oo aan u muuqan laad xor ah.
Robert Lewandowski ayaa ku guuldareystay inuu ka adkaado Yassine Bounou oo hal gool iska dhaliyay iyadoo Bayern ay ka jawaab celisay, laakiin wuu ka soo kabsaday taas ka hor qeybtii hore, isagoo kubad u dhigay Goretzka si uu booskiisa u xusho una dhaliyo goolka barbaraha.
Kooxda ku guuleysatay Champions League ayaa u maleyneysay inay hogaanka ku heyso lix daqiiqo gudahood markii dib loo bilaabay ka dib markii Muller uu isku dayay Lewandowski, iyadoo markii hore fursad loo siiyay Pole, laakiin VAR ayaa ogaatay in lambarka 9-aad ee Bayern uu ahaa offside markii ugu horeysay ee la aruurinayo baaskii Leroy Sane.
Waxay ahayd hal wado kadib intaas markii Bounou uu diiday Serge Gnabry iyo Diego Carlos oo ka hor istaagay soo celinta Sane, kaasoo gool uu iska diiday naftiisa ka dib markii Lewandowski lagu xukumay inuu qalad ku galay Sergio Escudero dhismaha.
Laakiin waxay ahayd Sevilla inay ahayd inay ciyaarta ku guuleysato waqtigii caadiga ahaa markii Jesus Navas uu sii daayay En-Nesyri oo weerar rogaal celis ah, kaliya Neuer ayaa badbaadiyay isku day aad u fudud oo la filan karayay.
Sevilla ayaa rajo soo cusbooneysiisay bilawgii muddada dheeriga ah, inkasta oo En-Nesyri uu eegay offside markii uu bartilmaameedsaday dadaal uu Neuer cagtiisa midig ugu rogay birta.
Martinez ayaana ka dhigay inuu bixiyo shan daqiiqo ka dib markii uu soo galay markii uu madax ku leexiyay Bounou ka dib markii uu goolhayaha kaliya riixi karay dadaalka Alaba hortiisa.